WARBIXIN: MAXAMUUD XAASHI CABDI OO BEESHIISA KU GUUBAABINAYA INAY LA DOONAAN GUDDOOMIYAHA XISBIGA KULMIYE | Maalmahanews
WARBIXIN: MAXAMUUD XAASHI CABDI OO BEESHIISA KU GUUBAABINAYA INAY LA DOONAAN GUDDOOMIYAHA XISBIGA KULMIYE
Maalimahanews(Hargeysa):- Tan iyo wakhtigii uu dalka ku soo laabtay wasiirkii awooda badnaa ee madaxtooyada xukuumadii hore Md Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa waxa la dareemayaa dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo la xidhiidha wareejinta gudoomiyaha xisbiga Kulmiye.
Sida ay sheegayaan warar ay helayso shabakada Hadhwanaagnews, wasiirkii hore ee madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa kulamo gooni gooni ah la qaatay wax garadka iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda beeshiisa, kulamadaas oo dulucdooda lagu sheegay inuu cadaadis ku saarayo inay la doonaan gudoomiyaha xisbiga Kulmiye oo uu damacsan yahay in lagu wareejiyo.
Dhinaca kale boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buurmadow) oo ka hadlayey munaasibad meher ah ayaa soo bandhigay damaca ay beeshiisu ka qabto in lagu soo wareejiyo gudoomiyaha xisbiga Kulmiye “Xisbiga Shuraako ayeynu ku ahayne haddii aanay ahayn wixii miyir qababa la hadal, reerku xisbigii uu galanta idinkula ahaa wuu sugayaa.” Ayuu yidhi Buurmadow.
Si kastaba ha ahaatee xisbiga Kulmiye oo ah mid Qaran haddii lagu celiyo guddoonkiisa beesha Bariga Burco waxay u muuqanaysa shambad ku sii dhacday arrimaha muuqda ee ku saabsan in xisbigu yahay shuraako laba reer, islamarkaana aanay beelaha kale foodda galin Karin hoggaankiisa.